सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामा भेटियो जय भैरव ! (हेर्नुहोस भिडियो) -
सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामा भेटियो जय भैरव ! (हेर्नुहोस भिडियो)
सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने भाषण धेरै हुन्छ, तर सपनामा देखिएको विषय विपनामा परिणत नहुन पनि सक्छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ दुवाकोटमा सपनामा देखिएको तथ्य शनिवार विपनामा परिणत भएको छ । फैटोका गणेश मन्दिरका पुजारी शंकर श्रेष्ठ गत सोमबार मन्दिरमै सुतेका थिए ।
‘मंगलवार विहान पौने १ बजे सपना देखे । उठेर सपनामा देखिएको ठाउँमा पुगेर त्यहाँको माटो उठाए । फेरि मन्दिरमै गएर सुते । विहान उठदा ६.३० बजिसकेको रहेछ’, पुजारी शंकर श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘मैले यस्तो सपना देखेको कुरा गाउँमा बताए। तर, कसैले पत्याएनन् । मैले सपनामा जस्तो दखेको थिए, त्यस्तै मूर्ति भेटियो।’ शंकरले शनिवार बिहान ओसीआरसीको आँगनमा पर्ने वारीमा आएर पूजा गर्न थाल्नुभयो ।पूजा गरेर उहाँले मूर्तिको खोज्ने भन्दै खन्न थाल्नुभयो । वरिपरिका छिमेकीलाई पनि उहाँले त्यहाँ मूर्ति भेटिएला भन्ने लागेको थिएन। उहाँले शनिवार बिहानभरी खन्दा नभेटिएपछि खाना खाएर आएर पुन खन्न थाल्नुभयो । खन्दै जाँदा जहाँनेर पूजा गरिएको थियो, त्यहिनेर मूर्ति भेटिएको हो । मूर्ति भेटिएपछि वरिपरिका छिमेकीहरुको त्यहाँ भिड नै लाग्यो ।
छिमेकी प्रकाशबहादुर खड्का अनुसार केही दिन शनिवार भैरवको मूर्ति भेटिएको ठाउँमा मध्यरातमा टपरी आकारमा वत्ती बलेको देखिएको थियो। ‘बत्ती बलेको ठाउँमा राति नै गएर हेर्दा केही पनि देखिएन,’उहाँले भन्नुभयो । त्यही ठाउँमा शनिवार भैरवको मूर्ति भेटिएको हो । मूर्ति भेटिएको जग्गा पहिले शंकरकै पिताको घर थियो । त्यो घरको भग्नावशेष अहिले पनि देखिन्छ । शंकरका पिता ८१ वर्षको हुनुहुन्छ । पिताले पनि आफूलाई केही नभनेको शंकरले बताउनुभयो । त्यो जग्गा उहाँका पिताले पाँच वर्ष अघि नै अरुलाई नै बेचिसक्नु भएको छ ।
छिमेकी शान्ति खड्काका अनुसार गणेशमन्दिरबाट हराएको मूर्ति नै त्यहाँ फेला परेको हो । ‘गणेशमन्दिरबाट पहिले नै भैरवको मूर्ति हरायो भन्ने सुनेका थियौ,सायद त्यही मूर्ति यहाँ फेला परेको हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । शंकरका अनुसार पिताले ढोकाको दाँयाबायाँ भैरवको मूर्ति राखेको सुनिएको थियो। ‘तर पछि त्यो मूर्ति कता पुग्यो, कसैले खोजी गरेनन्,’शंकरले भन्नुभयो ।
Previous ऐश्वर्या राय बच्चनले छोडिन अमिताभ बच्चनको घर , कारण यस्तो
Next के तपाई अत्यधिक जाडोका कारण नुहाउन सक्नु भएको छैन ? अपनाउनुहोस् यी उपाय